प्रधानमन्त्रीले सुने विज्ञका कुरा, के होला अबको कदम, पुनः लकडाउन होला कि नहोला ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको ग्राफ उकालो लागेको छ । अझ चिन्ताको विषय त कोरोना समुदायमा फैलिएको छ । किनकी शुरुवाती दिनमा भारत र विदेशबाट फर्किएका नेपालीमा मात्र कोरोना थियो ।
उनीहरुलाई आइसोलेसनमा राखी उपचार गर्दा कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने सम्भावना थिएन । तर, भारतबाट लुकिछिपी पस्ने र नेपाल आइसकेपछि पनि क्वारेन्टिनमा नबस्दा अब शहरी क्षेत्र र तराई भेगमा कोरोनाको दोस्रो लहर फैलने क्रममा रहेको छ ।
मंगलबारको बैठकमा भने उनले विज्ञका कुरा धैर्यपूर्वक सुनेको बैठकमा सहभागी एक अर्थशास्त्रीले जानकारी दिए । आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई पनि राखिएको थियो । बैठकमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि निम्ता थियो ।
तर, उनी अर्कै छलफलमा व्यस्त भएको बताइएको छ । विज्ञसँग छलफल गरेका प्रधानमन्त्री अब कस्तो कदम चाल्दैछन्, त्यो भने आज बैठकमा सहभागी कसैले पनि अनुमान लगाउन भने सकेनन् ।